नेपालमा पनि कालो ढुसीका बिरामी,यस बाट कसरी बच्ने ? « गोर्खा आवाज
नेपालमा पनि कालो ढुसीका बिरामी,यस बाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं । नेपालमा पनि कालो ढुसी (ब्ल्याक फङ्गस) का बिरामी भेटिएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म १० जनामा कालो ढुसीका बिरामी पुष्टि भएको जनाइएको छ ।